ला–लिगामा अबको स्टार को ? - Naya Pageला–लिगामा अबको स्टार को ? - Naya Page
ला–लिगामा अबको स्टार को ?
काठमाडौं, ३० साउन । सत्र वर्षपछि पहिलो पटक मेस्सी बिना नै ला–लिगा आयोजना हुँदैछ । ला–लिगामा ठूला स्टार को हुन् भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ । पछिल्लो दशक निर्विवाद रुपमा क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी ला–लिगाका ठूला स्टार थिए ।
तर, रोनाल्डो २०१८ मा रियल म्याड्रिड छाडेर इटालियन क्लब युभेन्टस्मा गए । र मेस्सीले यसै वर्ष बार्सिलोनाबाट फ्रान्सेली क्लब पिएसजीमा गए । रियल म्याड्रिडकै अर्का चर्चित स्टार सर्जियो रामोस मेस्सीभन्दा एक महिनाअघि नै पिएसजीमा गएका थिए ।
पछिल्लो दशक ला–लिगाका खेलाडीले मात्रै बेलोन डि’ अर जित्न सके । तर, त्यसमध्ये अहिले एक मात्रै खेलाडी लुका मोडरिक ला–लिगामा बाँकी छन् । उनले २०१८ मा एकपटक यो अवार्ड जितेका थिए । बाँकी समय रोनाल्डो र मेस्सीका नाममा यो अवार्ड थियो, उनीहरु दुबै अन्यत्र लिगमा गए ।
स्पेनिस लिगमा स्टार खेलाडी नै नभएका भने होइनन् । एथलेटिको म्याड्रिडका गोलकिपर जान ओब्लाक, रियल म्याड्रिका फरवार्ड करिम बेन्जामा, बार्सिलोनाका फरवार्ड एन्टोनियो ग्रिजम्यान, एथलेटिको म्याड्रिडका फरवार्ड लुईस सुआरेज, रियल म्याड्रिडका डिफेन्र डेभिड अल्बा, बार्साका उदयीमान मिडफिल्डर पेड्री, भिल्लारियलका जेरार्ड मोरेनो, एथलेटिकोका मार्कोस लोरेन्टो त्यस्ता स्टार हुन्, जसले कुनै पनि समय टोली उल्ट्याई दिन सक्छन् ।
रियलका इडेन हाजार्ड यस्तै एक प्रतिभाशाली खेलाडी हुन् । तर ला–लिगामा आबद्ध भएयता उनी चोटले समस्यामा छन् । उनले स्वभाविक खेल देखाउनै सकेका छैनन् । उनी फर्ममा फर्किए भने रियलले बाँकी टिमलाई दबाबमा राख्नसक्छ । बार्सिलोनाका मेम्फिस डेपे पनि स्टार खेलाडी हुन् ।
मेस्सीको बर्हिगमनसँगै उनीबाट बार्साले गर्ने अपेक्षा पनि १० गुणाले बढेको छ । यो दबाबलाई डेपेले कसरी चिर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । बार्सिलोनामा यसै सिजन म्यानचेस्टर सिटीबाट स्टार खेलाडी सर्जियो अगुइरो पनि भित्र्एिका छन् । त्यसैगरी, ओस्माने डेम्बेले र काउटिन्हो जस्ता स्टार पनि छन्, तर आफ्नो स्वभाविक खेल देखाउन नसक्दा यी दुबै खेलाडी ‘फ्लप’ को ट्याग भिर्न बाध्य छन् । एजेन्सी